Ciraaqiyiin dalkoodii dib ugu laabtay | Somaliska
Nolosha / Socdaalka
Ciraaqiyiin dalkoodii dib ugu laabtay
Ciraaqiyiinta magangalyadda ka codsaday dalkaan Iswiidhan ayaa qaar ka mid ahi waxaa ay dib ugu laabteen dalkoodii hooyo, ka dib markii codsigooda magangalyo qaatay muddo dheer.
Sanadkan sii dhamaanaya ayaa waxaa kordhay tirradda ciraaqiyiinta ah ee dalkoodii dib ugu laabtay, saddex boqol oo ka mid ah ayaa laanta socdaalka sheegay in bil kasta iskood uga tagaan dalkaan Iswiidhan.
Sudat Alwandaui, waxaa uu ka mid yahay dadka dalkoodii dib ugu laabtay, waxa uu sheegay in muddo 8 bilood ah ay qaadatay in codsigiisa magangalyo la eego ama la furo kiiskiisa.
“Muddo sideed bilood ah ayey qaataya in la ii soo diro interfiyuu ama wareysi, waxaan la daganaa qof qaarabadeyda ah oo Stockholm degan, maalintiina waxaa la isiin jiray 61 karoon. 61 karoon-na wax ma gooyso aan ka aheyn baakad sigaar ah waana xaalad adag in lugu noolaado” ayuu yiri Sudat Alwandaui oo ka sheekeynayey waxyaabihii keenay in uu dalkaan iskaga hayaamo oo dalkiisi hooyo ku noolaado.
Sidoo kale Ciraaqiyiin gaaray 2.600 ayaa iskood ugu laabtay Ciraaq, tiradaasina waxaa ay 177 ka badan tahay sanadkii hore marka la is bar bardhigo. Gabadha lugu magacaabo Kristina Rännar, waa gacan yare ka tirsan laanta socdaalka waxaa ay sheegtay in waqtiga la sugayo interfiyuu-ga oo aad u dheer oo keliya eeysan keenin go,aanka ciraaqiyiinta dalkooda ku laabtay ee sharciga cusub ee hirgalay dhawaan qeyb ka yahay.
“Waxaa xitaa dadka lugu wargeliyaa in sharciga cusub yahay mid ku adag in qofku helo daganaansho joogto ah , xitaa kuwa sharciga kmg ah heysta laga ceshanayo ee uu yahay oo keliya ku meel gaar” ayey tiri Kristina oo sharxeeysay sharcigan cusub ee soo baxay ee la xirriira muhaajiriinta. Waxaa ay sidoo kale u xistay in boqolkiiba afartan (40%) dadka Ciraaqiyiinta la siiyo jawaab qayaxan oo diidmo ah. Taasina ay sababto in inbadan oo iyaga ka mid ah dalka iskaga tagaan ama dhuumaleeystaan.
Sudat iyo qoyskiisa waxaa ay hadda ku nool yihiin waqooyiga Ciraaq, halkaas oo markiisi hore ka ahaa waardiya u shaqeeysa maamulka halkaasi ka jira, hase ahaatee kolkii ay dheer jeer hanjabaado soo gaareen ayuu Iswiidhan weydiistay codsi magangalyo. Wuxuu sidoo kale sheegay in uu aaminsanaa in Iswiidhan yahay dal u wanaagsan qoysaska carruuraha leh, laakin uu ku arkay wax uu filan waayey. Taas oo ah in sharciyada ay is bad badalaya had iyo jeer keeneen in wax walba adkaado.
Sidaas si la mid ah ayuu shariciga cusubi wuxuu saameyn ku yeeshay soomaali badan oo qaarkood loo diday sharciyadda kuwaas oo ku dhuumaaleeysanaya meelo ka mid ah dalkaan Iswiidhan ama laga musaafuriyey.
21 bishii juunyo ee sanadkan ayaa baarlamaanka Iswiidhan ayaa go.aansaday in la xadidido sharciga magangalyo doonka, waxaana sharcigan yahay mid aan suuragal ka dhigeeyn in dalka degaansho laga hello. Waxaa sidoo kale sharcigai dhaqan galay 21 bishii julaayo ee isla sanadkan waxaana uu jiri doona muddo saddex sanno ah.
Swedish badan oo doonaya in ay la saaxiibaan qaxootiga
Sweden oo cambaareysay dowlada Masar
Wiil 12 jir ah oo booliska ku weeraray Rinkeby
asc jimcale ciraaqiyintu waxay ka cabnyaan 8bilod angna waxanu sugaynaa dacwad 22bilod marksay dhiigii noo kala qadeen hadana jawaabtii naga haystaan 3bilod walina wax diidma ah ama oglaansho ah kama hayno ciraqigii 8,bilod ka carry baa na dhaama celsha biyaha
October 4, 2016 at 16:34
Abaayo adiga dadka dacwada u socoto maa ku jirtaa. Meeqa bil ay kaa xareeysantahay. 2 sano maa ku jirtaa mse dadka horey isku sheegte?